Dowladda Chile oo joojisay shirar caalami ah oo ay marti galin lahayd – Radio Muqdisho
Dowladda Chile ayaa sheegtay in ay ka baxday marti galinta labo shir oo caalami ah kuwaas oo bilaha soo aadan lagu waday in dalkaasi ay ka dhacaan.
Madaweynaha Chile Sebastián Piñera ayaa sheegay in go’aanka ay dowladiisu qaadatay uu ku saleesan yahay dibad baxyada rabshadaha wato ee wali dalkiisa ka soconaya.
Sidoo kale madaxweynaha ayaa sheegay in ay diirada saarayaan sidii ay uga jawaabi lahaayeen tabashada shacabka halkii ay ku mashquuli lahaayeen qaban qaabada shirarkaasi.
Shirka Isbadalka Cilmadda dunida oo Qaramada Midoobe hor boodeyso ayaa lagu waday in 2’da illaa iyo 13’ka bisha December uu ka dhaco caasimada dalka Chile, halka shirka ganacsiga Apec’na lagu waday in bisha soo aadan uu ka dhaco.
Qaramada Midoobe ayaana sheegtay in ay raadinayso meel kale oo ay shirkaasi ku qabato.